Deegaan isku dhafan - Xalka ayaa looga baahan yahay Geo-Engineering - Geofumadas
Deegaan isku dhafan - Xalka ayaa looga baahan yahay Geo-Engineering
Maarso, 2019 Engineering, tabo cusub, Microstation-Bentley, topografia
Waxaan ku khasbanaanay inaan ku noolaano waqti qurux badan marka la eego farsamooyinka kala duwan, hababka, jilayaasha, isbeddellada iyo qalabka waxay isku xiran yihiin isticmaalaha ugu dambeeya. Shuruudaha ka jira goobta Geo-injineerka maanta waa in xal loo helo sheyga kama dambaysta ah ee la samayn karo mana aha keliya qaybaha; sida ay had iyo jeer ahayd, inkastoo -waan fahmi karnaa- in shuruudaha istaandarka, isku xirnaanta iyo horumarka tiknoolajiyada sida lagu arko maanta ma aha mid marwalba laga faa'iidaysto.
Iyada oo ku saleysan this, gaashaanbuur la soo dhaafay oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha weyn ee xal loogu talagalay Geo-injineernimada ayaa si loo xaqiijiyo socodka joogto ah ka conceptualization, iyada oo afku gashiga ee beerta, Tusaale, design, dhismaha iyo qaabka natiijada this ee jawi firfircoon oo bixin doona sii wadista shayga la dhisay; ha ahaato dhismo, buundo, warshad warshad ama meel lagu ilaaliyo kaynta. Inkasta oo gudaha waxyaabaha oo dhan ka kooban yihiin diiwaanka naftiisa jirka, korontada, sharci, shaqo ama suuqa qaarkood sita waa in ay kuwani yihiin oo kaliya X-rays ee guud ahaan in ugu dambeyntii ah danaha xisbiga xiiso.
Tusaale ahaan sidan «Deegaan isku-dhafan»Waa hab xiiso leh oo doonaya horumarinta xal CONNECT Edition, halkaas oo soo saaraha ayaa ku dhawaaqay in ay mugdiga jira codsiyada dhexeeya 2019 iyo 2021, ka badan (badan) xal u yar habka ugu waaweyn yihiin waxaas samaysay wareegga. Si taas loo gaaro, waxaa rumowdey qiimaha qaniimooyin dhawaan, wareejinta user xal waayo, hadda oo kaliya aan aadayo kara dhacdooyinka ugu danbeeyay ee Singapore iyo London.
Waa maxay betley's betley
Qeybta ugu muhiimsan, waxaan horeba u sheegay, xalal muhiim ah. Raadinta si aad uhesho qiimaha dadka isticmaala iyadoo ka dhalatay maalgashiga lagu sameeyey iibka iyo horumarinta qalabka dhawaanta -laakiin dabcan, isdhexgalka geedi socodka loogu talagalay isticmaalaha dhammaadka-. Waxaa la yaab leh, kuma aragno xalka taxanaha cusub ee CONNECT oo u eg "Topography (Goobaha / geopack)", oo loo fahmay inay tahay hab fudud oo lagu soo afjari karo; maadaama uusan qofna sameynin DTM si uu u rinjiyeeyo oo uu darbiga u sudho; Dhammaan qaabaynta dhulku way socdaan maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay horumariyaan kaabayaasha magaalooyinka / deegaanka ama horumarka dushiisa.
Kadibna waxaa jira isdhexgelin dhamaystiran oo lala yeesho wada-hawlgalayaasha istaraatiijiga ah ee BentleySystems, sida Topcon dhamaadka qabashada iyo dib-u-eegista moodooyinka beerta; Microsoft taas oo kor u qaadi doonta isku-xirka Azure, korsashada ujeeddooyinka shaqada -madadaalo lahayn- Xaqiiqo kordhin ah oo leh xalal carqaladeed sida Holo-lens2 iyo wax la mid ah daadinta Bing; Siemens kaas oo ka sii wadi doona internetka -inta hartay- Waxyaabaha iyo kala-soocidda laba mataano ah ayaa mudnaanta siinaya injineernimada warshadaha. Bentley si adag uma noqon doonto qaababka wareegga nolosha ee dhismaha -waxba ka yar-.
Sidaa daraadeed, afartan xalood ayaa mudnaanta koowaad loo siiyay inay yihiin:
Tani waxay sii wadi doontaa qalabka qaabaynta guud, oo leh nadiifiye nadiif ah, barasho oo la xidhiidha isticmaalka qalabyada iyo cusbooneysiinta gawaarida iyadoon loo baahnayn dib u samaynta. Sidoo kale habka qaabka, waxay la imaan doontaa faahfaahin ku saleysan sifooyinka walxaha, warar sahlan iyo muuqaal yar oo muuqaal ah. Marka la eego aalado, waxaa la filayaa xaddiyo badan oo ka mid ah dhadhanka, jilicsanaanta iyo sawirrada sawirrada. Ugu dambeyntii, marka la eego suurtogalnimada, waxaanu raadineynaa xitaa maareynta hufnaanta ee faylasha waaweyn, kor u qaadida 64 xayawaanka iyo dhexgalka daruuraha.
Iyada oo dhan tan, waxay weli noqon doontaa miiska sawirka. Yaa doonaya inuu DGN ka dhigo mid la heli karo oo ka mid ah API oo furan oo isku dhafan Hubs, oo ku jira lineka I-model.js. Tani waxaa la filayaa in ay soo bandhigto isticmaalka xalalka xalka.
Sababtoo ah habka software-ka Bentley wuxuu u shaqeeyaa, oo faylkiisa dgn iyo horumarkiisu uu xasillan yahay muddada fog, waxa uu noqon doonaa mid xiiso leh inuu arko sida isticmaalaha daacadnimo ah si tartiib tartiib ah u xallilaan xalka baroosaska. Dabcan, waxay noqon doontaa mid ka mid ah shaqada Qiimeeyaal ku daray iyo hababka dib u qaabaynta liisamada ay shirkadu u fidiso barnaamijka heerka adeegga. In kastoo, ma yaabi doonno, dad badan ayaa sii wadi doona wakhtiga taageerada la bixiyay, waayo waxa aan aragno ilaa maanta hababka aan shaqsiyan u fulinnay. Nidaamkani wuxuu khuseeyaa guud ahaan codsiyada hadda jira halkaasoo jadwal lagu qeexay qalabkii dhaxalka ee taxanaha SELECT iyo inuu furo habka taxanaha cusub ee lagu magacaabo CONNECT.
Ruqsadaha Hantida ka hor SANDALKA SELECT sida V8, XM iyo 2004 mar dambe lama taageeri doono.
Ruqsadaha noocyada hore ee SELECT, waxaan u maleyneynaa 1 iyo 2, inay lahaan doonaan Taageero ilaa Luuliyo 2019.
Ruqsadaha noocyada dhow ee SELECT Series ayaa la taageerayaa illaa Janaayo 2021.
Ruqsadaha taxanaha CONNECT ma lahaan doonaan taageerada joojinta.
Tani waxay noqon doontaa xalka udubdhexaadinta waddooyinka, oo leh shaxanka hoose, qaabaynta, iyo habka walxaha wareegga nolosha. Sidaa daraadeed sababta Bentley ay ku darsatay qiimaha iibsiyada dhowaan, tusaale ahaan shirkadda in ay ku sifayso calaamadaha wadooyinka ee Maraykanka; kaliya qiyaas qaan code oo ay ku jiraan sifooyinka hantidaas la xidhiidha naqshadeynta, dhismaha, dayactirka, ballaarinta ama feylka.
Deegaan isku dhafan ayaa lagu xallin la'yahay xogta isku xira. Tani si fiican ayaa loo qabtaa ama si xun u isticmaala qalab kombuyuutar. Waxay lagama maarmaan u tahay isdhexgalka hababka.
Waxaa la filayaa in la isku xiro awoodaha dhinacyada xiisaha leh (dadka), xogta iyo shaqo-socodka; farsamaynta faylka mashruuca ah (miisaaniyadda iyo waqtiyada). Sida la qabsashada waddanka la macno ah, waxaa la filayaa ansaxinta fiican ee hawlaha sida kormeerka iyo maaraynta hantida, taas oo ka mid ah qiimaynta xaaladaha jira, Tusaale as-dhisay waxyaabaha ka soo ururiyey xogta duurka qaabeeya sida meelaha mesh macquul ah . Sida bet interoperability waa in laga gudbo model xogta in geeddi-socodka in ay ku hadlaan luqad isku mid ah la Revit (Autodesk), Tekla (Trimble) iyo kuwo kale.
Waxaa cad in qaababka badan oo xal this toosan loogu talo gali doonaa mobile, ugu yaraan waxa ProjectWise taageertaa ka danbeeya / AssetWise laakiin waa in xal desktop-ka (Microstation) hadlaan. OpenRoads kicisaa ku adkaysanayaan on Qaybinta wareejin qaabka dhexeeya sahmiyaha, dhisaha, naqshadeeye iyo shaqaale, shaqeyn kartaa model ah nolosha dhabta ah, codsiga isbedel design in waqtiga dhabta ah yareeyo tallaabooyinka, foomamka, oo kuwanuna waxay ka dhimman waxaan la kulmay waxaan ku horumariyo mashaariic xafiiska iska kiiloomitir, la 36 sentigarade iyo walaaca ah in cimiladu ay xumaato.
Dhibaato weyn, iyadoo tixgelinaysa sharadkaas oo Bentley ugu yeedhay «Deegaanka Iskuduwida Guud«, Taas oo la rajeynayo in dariiq jid isku xiraya laba magaalo waa shay nool, kaas oo ujeedka shirkad gaar u leeyahay fikrad qaabeynta uu u arko qaab ganacsi, laakiin in mataankeeda dijitaalka ah ay yihiin diiwaanno halkaas oo ay ka jiraan xaqiiqooyin ku saabsan shirqoolada ku xeeran kuwa saameeya ama xaddidaya isticmaalka sida fududeynta wadooyinka, oo leh naqshad joomatari ah oo la xiriirta taraafikada iyo xawaaraha, iyo sidoo kale is-waafajin jireed oo ku xiran miisaaniyad halbeega lagu kala qaybiyey qalabka, shaqada, qalabka iyo qandaraas hoosaadyada. Waa qayb ka mid ah qiimaha lagu daray ee isku-darka waxyaabaha dhowaan la soo iibsaday ee AssetWise sida Synchro, AlWorx iyo ContextCapture. Caqli macquul ah maareynta xogta sayniska ee aan rabo inaan arko!
Halkan waxaan ku arki dadaal weyn si ay u potentiate AECOsim haatan ma, sida xal dhamaystiran injineero in socodka u ogolaanaya conceptualization ee mugga, meel, shaqeynayaan, dhaqdhaqaaqa, iyo sidoo kale injineerada qaababka naqshadaynta biyaha, korontada, nidaamka qaboojinta, iwm. Intaa waxaa dheer, tani ujeedooyinka design ka mid ah is-dhexgalka guul qiimaha iyo jadwalka fulinta (Synchro), oo ay ku jiraan Qaabaynta iyo la socodka loo gaarsiiyo mashruuca, maamulka Gudaha dhismaha sida hanti ah oo ay gelinta deegaanka hantida maguurtada ah ee xiiso hore in this oo dhan maalgashi
Muuqaaladan soo jeediyay ku salaysan yihiin potentiation ee daacad u ah simayo BIM CAD, awooda in ka yar u qaaddo in ay naqshado kaabayaasha adag. Ma ballan dalab raacaysa xeerarka IFC iyo kelidaa, taas oo noqon doonta fursad weyn waafajinta dadka, xogta iyo mashaariic-soociddiisa anshax taas oo sahlaysa qalliin fudud, maadaama ay ahayd software ah si fiican loo qorsheeyay iyo mashruuca abaabulay waxaa intaanan iman ka hor . Sida OpenRoads, OpenBuildings keentaa awaamiir sahan theme iyo deegaanka Qaabaynta soo saari karaan natiijooyinka photorealistic on dusha ka daruuraha dhibic oo lagu daydo photogrammetric qabtay joogto ah.
In seenyo ugu fiican, OpenBuildings raadinaya jawi caadi ah, waxay noqon xal isagoo kakanaanta ee si faahfaahsan waxa uu u qaabsan galaas a goolad oo dhan gashiga iyo falanqaynta dhammaan dhinacyada sida HVAC falanqaynta (tamarta, hawo, iftiin, iwm.)
Waxaa laga soocaa xalalka laanta kale ee injineernimada, STAAD waxay gaar u tahay injineerada dhismaha. Waxaan caddaynaynaa, in tani ay ka mid tahay injineerada madaniga ah, kuwaas oo daneynaya inay ka dhigaan dhismayaal deegaan.
Oo qiimo leh, version this leh in ka badan 90 codes caalamiga ah iyo ka shaqeynayaan in kaabayaasha kale ee u baahan in design dhismaha iman doonaa; waxa kale oo uu bixiyaa isdhexgalka socodka ee u dhaxeeya naqshadda muuqaalka, naqshadeynta falanqaynta iyo qaabeynta saddex-cabbirka; sida OpenBuildings ka mid ah interoperability la Revit, Tekla iyo workflows ay ka mid yihiin xiriirka topographer - naqshada - Injineer rayidka ah - Injineer farsamo / korontada.
Sidaas darteed u dareemi ayaa la filayaa in ay tayadoodii jeer falanqaynta ilaa wakhtiga 200 ka badan hababka dhaqanka, xiiso design dhismaha adag tahay in la qalabayn inuu ku soo laabto sweatshop ah, laakiin optimizable markii xiran isdhexgalka la edbiyo kale iyo maamulka fursad mashaariic waaweyn.
Ugu dambeyntii, mudnaanta 5 ee taxadarka ah ee taxanaha CONNECT, waxaa jira mawduuca Waters. Waxa ay u muuqataa bet a gebi ahaanba guul, ka fiirsaneysa in Tusaale, design iyo dhismaha aan la go'ay karaa this ifafaale ka baxsan ee la xidhiidha musiibooyinka dabiiciga ah waxaa weeyaan xiisaha ay u qabto arrimaha deegaanka iyo khayraadka qiimaha sare ee labaatankii sano ee soo socda.
Halkan waxaan ka rajeyneynaa isdhexgelin weyn oo ku saabsan geospatial, mudnaanta ku jirta BingMaps iyo BingRoads (ee wada-hawlgalaha istiraatijiyadeed ee Microsoft). Arrinta shabakadaha biyaha Bentley horeyba way u wanaagsantahay, heerka heerkulka, xitaa iyada oo leh awood muuqaal kooban, oo aan fileyno in ay noqoto mid soo jiidasho leh; Dabcan, haddii aad wanaajiso sifooyinka warbixinta iyo qaabka ku habboon deegaanka dabiiciga / dhismaha, waxay noqon doontaa mid weyn.
Way fiicnaan laheyd in uu arko isaga oo sannadkan ku sugan magaalada Singapore, halkaas oo uu hubaal ka muujin doonaa mashaariic horey u soo marey qadadan oo uu rajeynayo in uu xoojiyo CONNECT Edition habka loo yaqaan 'transversal'. Tani waxay u aragtay xalalka iyo miisaaniyada, qaabaynta habka dhismaha, sida qaabaynta magaalooyinka iyo Internet-ka ah inkasta oo ay yihiin kuwa ku-meel-gaadhka ah, ma haystaan ​​user qaas ah -hadda- Waxaa hubaal ah in ku dari kartaa qiimaha badan haddii kaalinta hab aragti Silsilad qiimaha keentay macluumaadka maareynta maamulka hawlgalka ah; iyada oo la tixraacayo silsiladdaas oo loogu talagalay dadka isticmaala farsamada GIS - CAD - BIM - DigitalTwin - SmartCity laakiin qawaaniinta habraaca ayaa ah Qaadashada - Moodelinta - Naqshadeynta - Dhismaha - Hawlgallada.
Waxa kale oo ay noqon doontaa mid wanaagsan in la arko sheyga tartamayaasha kale ee leh aragti guud. Waxaa jiri doona wakhti ay kaga hadlaan iyaga.
Hambalyo u ah dadaalkan ku wajahan xalal muhiim ah, taas oo ah ugu yaraan in isticmaalayaashu ay filayaan marka loo eego Geo-Engineering; kuwaas oo danahooda muhiimka ah ay ku yar yahiin waqtiga dhimista, dhimista kharashyada iyo raadinta. Dabcan, tani waxay si cad u qeexaysaa in xalka ay u ogolaato kooxaha isku xira dadka, hawlaha shaqo ee maaraynta dhamaystiran ee wareegga mashruuca.
Post Previous«Previous Digital Water Works, Inc. waxay maalgelin ka heshaa Bentley Systems
Post Next Oracle waa Kaaliyaha Aasaasiga ah ee Forum 2019 Geospatial ForumNext »